ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ရိုက်နှက်ခံရသူ ဘယ်မျက်လုံးကွယ်
ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ရိုက်နှက်ခံရသူ ဘယ်မျက်လ...
5 ธ.ค. 2562 - 23:49 น.
ပဲခူးမြို့ ရွာသစ်ရပ်ကွက်မှာ နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက် ညပိုင်းက ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ဝိုင်းရိုက်ခံရလို့ ပဲခူး ဆေးရုံမှာ ကုသနေရတဲ့ အမျိုးသားဟာ အရိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကွယ်သွားတယ်လို့ ပဲခူးတိုင်း အစိုးရ လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေးက ပြောပါတယ်။
ပဲခူးမြို့ ကျောက်ကြီးစုရပ်ကွက် စီမံကိန်း ၅ လမ်း မှာနေတဲ့ ကိုငွေဖြိုးအောင်ဟာ အဲဒီနေ့ ညအစောပိုင်းက စီမံကိန်း ၄ လမ်းမှာရှိတဲ့ နေအိမ်တစ်အိမ်ကို ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သူခိုးလို့ အော်ဟစ်ခံရတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးရာက ရွာသစ်ရပ်ကွက် အရောက်မှာ ကလေးသူခိုး ဆိုပြီး မှားယွင်းရိုက်နှက်တာကို ခံခဲ့ရတာပါ။
"သုံးရက်၊လေးရက်လောက်တော့ ကုသမှု ခံယူရတယ်။ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရသွားပါပြီ။ မျက်လုံး ထိခိုက်တာတော့ မှန်ပါတယ်" လို့ ပဲခူး ပြည်သူ့ ဆေးရုံက ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်းက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကလေးတစ်ဦးကို ဝင်ရောက် ခိုးယူတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရေနံချောင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ရန်ကုန်၊ ပဲခူး စတဲ့ မြို့တွေမှာလည်း ကလေးခိုးတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ်က မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ကလေးသူခိုးမိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားကြောင့် ကျောင်းရှေ့မှာ ကလေးမိဘတွေ စုဝေး ရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ် လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့် ပျံ့နှံ့လာတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘလော့ဂါ တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးနေဘုန်းလတ်က ဘီဘီစီကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေ၊ cyber police လို နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရဲဌာနကပဲ အဓိက လုပ်တာပဲ။ သုံးခုလိုတယ်။ cyber police လိုတယ်။ cyber law လိုတယ်။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှုခင်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ချနိုင်တဲ့ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍလိုတယ်"
"အဲတော့ အဲဒီသုံးခုလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အားနည်းတယ်"
"ဒါပေမဲ့လည်း လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်လို့ရတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖြန့်နေတဲ့ အကောင့်မျိုးတွေ ဘာတွေရှိတယ်ဆို ဒါတွေကို trace သေချာလိုက်မယ်ဆိုရင် လိုက်လို့ရတယ်"
"ဒါတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့ဟာပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း အခု နီးလာပြီဆိုတော့ ဒါမျိုးနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေက အများကြီး ထပ်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ မြင်တာပေါ့"
၂၀၁၆ ခုနှစ် ကလည်း ကလေးတွေ လိုက်ခိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ကလေးသူခိုးလို့ အထင်မှားပြီး မကွေးမြို့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး မှားယွင်း ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသလို မန္တလေး မရမ်းခြံ သင်္ဘောဆိပ်မှာလည်း အမျိုးသားတစ်ဦး အသက်ဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ရိုက်နှက်ခံရသူ ဘယ်မျက်လုံးကွယ်